Ob. Lammaa moo Dr. Abiyyi? Hanga kubbaan Oromoo harkaa hin buunetti hunduu ni ta'a. - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Ob. Lammaa moo Dr. Abiyyi? Hanga kubbaan Oromoo harkaa hin buunetti hunduu...
Ob. Lammaa moo Dr. Abiyyi? Hanga kubbaan Oromoo harkaa hin buunetti hunduu ni ta’a.
ADWUI’n tibbana muummee ministeraa filatuuf deema. Bu’aa filannoo ADWUI ammatti hin beeknu. Filannoon ummataa garuu ifa: Ob. Lammaa Magarsaati. Hooggannoota ADWUI’n amma wolitti qabee bira taa’u keessaa namni akka Ob. Lammaa Magarsaatti biyya tasgabbeessuu fi cee’umsa gara dimokraasii dhugoomsu hin jiru. Hoogganaan sabni hundi, kittillayyoota Woyyaaneen alatti, abdii irratti gate Lammaa Magarsaati. Kuni dhugaa bara kanaati. Garuu, seenaan kan ragaa bayu ADWUI’n yeroo hunda faallaa fedhii ummataa dhaabata; tankaarfii ummanni arguu hin feene fudhata. Ammas, gareen humna sammuutti osoo hin taane humna qawweetti amanu Lammaa dhiisee nama biraan qabatee gadi bayuu mala. Ana kun hin raaju. Isinis ni raaja jedhee hin amanu. Kan rajii natti ta’u yoo ADWUI’n Lammaa MM goote. Kana jechuun yeroo jalqabaaf tankaarfiin ADWUI fi filannoon ummata wolgite jechuudha. Kana rajiin qofti hin ibsu. Kuni mallattoo jijjiiramaaf qophaayuu ykn harka kennattaa jiraachuu Woyyaanees ta’a.
Lammaa Magarsaa yoo MM ta’e hegereen biyyattii abdachiisaadha. Yoo sun hin ta’in hafe namni haala qabatamaa amma jiru keessatti biyyattii san hoogganuu danda’au Dr. Abiyyi Ahmad. Yoo sunis hin taane abdiin hegeree Itoophiyaa kan jiru harka #GareeLammaati. Garee kana keessaa namni tokko mummee ministeraa ta’uun, bu’aan silaa argamuu malu xiqaatus, kasaaraa guddaa hin qabu. Kasaaraan guddaan kubbaan tun Oromoo harkaa bayuudha. Dogoggorri waa tuffachuudha. Xiqqoo-guddoo osoo hin jenne carraa dhufte hunda akka adurretti qab godhuu qabna. Takka liqimsinee tan hafteef amuummachuu haa barru.
Haala qabatamaa amma jiru keessatti waan fedha keennaa hunda ni guuttanna, gaafii keennaaf deebii quubsaa arganna jennee yaaduun uf sobuudha. Fedhiin keenna Lammaan MM Itoophiyaa akka ta’uudha. Woyyaaneen Lammaa fi Dr. Abiyyiin xireeffatteerti. Namni sabaaf hojjatu diina biraa, abaarsa malee, yomuu deeggarsa hin argatu. Dubbiin gabaabaadha. Lammaan MM hin ta’u taanaan, Dr. Abiyyitti dirqamni sun kennamuu qaba. Hammeenyi, kasaaraan guddaan, kubbaan tun nu harkaa butee harka diinaa seenuudha. Taphicha abshaalummaa fi uf eeggannaan haa taphannu. Hiree argamtu hundatti fayyadamuu haa barannu.
Previous articleMuummee Ministeraa ta’uudhaaf kan Lammaa Magarsaa irra muuxxannoos ta’ee dandeettii qabu hin jiru
Next articleXurree Kiiloo 4 ittiin seennu dhiisne humnaa fi yerooo keenna gidaara dhiibuu irratti galaafachuun abshaalummaa siyaasaa ta’uu hin danda’u